Asingba Nchedo Nchegbu na Confidentiality Regrading Police Isi yi igwefoto - OMG Ngwọta
Ernbawanye nchegbu na ntụkwasị obi na - atụgharị igwefoto Worn Police Body Worn
Ndị uwe ojii-Worn Cameras bulitere nche na nchedo nzuzo
Iswa juputara na contra contractions na kere eke. A na-arụ ọtụtụ igwe ọgbara ọhụrụ kwa ụbọchị. Ihe kpatara na igwe ndi a bu inyere ndi mmadu aka n’ọrụ ha na ime ka oru ha di nfe. Ventiondị dị ebube dị egwu nke oge a bụ igwefoto eyi.
Kedu ihe bụ igwefoto ahụ na-eyi?
Igwefoto ahụ na-eyi bụ kamera ndị pụrụ iche nke eji edekọ ụbọchị ọrụ mmadụ site na itinye ya na ahụ onye ahụ. Isi ihe igwefoto ndị a dị na ngalaba ndị uwe ojii. Ọ na - enye ndị uwe ojii ezigbo enyemaka site na ịdekọ ọnọdụ ọjọọ ọ bụla nke mere ha. Enwere ike iji ndekọ ahụ iji nye ihe akaebe ọ bụla. Mana na uru, ọghọm ndị a nwekwara ọtụtụ ọghọm dị na ya. Ka anyị leba anya n’ihe ndị a bụ.
Igwefoto ahụ na-eyi n'ahụ na-ewulite nchedo na nzuzo:
Dịka anyị hụla igwefoto ndị uwe ojii na-eyi uwe na-enye nkwado na nkwado maka ndị uwe ojii. Igwefoto ndi eyi uwe nwere ikike idekọ ihe ndi uwe ojii na-ahụ. Nke ahụ na - enyere ha aka ịdekọ oge ọ bụla gụnyere ihe nzuzo nke ọtụtụ mmadụ. N’ihi nke a, a na-echegbu nzuzo ha. Ebe ịbanye n'ime nzuzo nke mmadụ bụ omume rụrụ arụ yana mmebi iwu. Nke a na-enye ha nnukwu ndọghachi azụ site n'ịwelite nchekwa na nchedo nzuzo. Ọ bụ ya mere na-eme mkpesa banyere iji kamera ndị nwere ahụ mmadụ eme ihe mkpesa.
You chọrọ ịma ihe nchekwa nchekwa nke igwefoto ndị a na-ebulikwa ma oleekwa otú e si bulie nchegbu ndị a? Ka anyị leba anya n’ihe ndị dị n’okpuru.
Kedụ ka igwefoto ahụ na-eyi mmadụ ga-esi bulie nchedo na nzuzo?
Egosiputa ndi uwe ojii nke uwe ndi uwe ojii bu ezigbo uzo enyemaka na nkwado diri ndi uwe ojii. Isi ihe igwefoto ndị a bụ ịdekọ ihe ndị ọrụ uwe ojii na-ahụ. Na nkenke, ọ na-akpa àgwà dị ka onye anya maka onye uwe ojii. N’ihi nke a, a na-ahụzi ụzọ nke ịhụ ụzọ ma na-abawanye. Ojiji eji ese foto mekwara emeela ka ibelata ihe omume nke ndị uwe ojii. Ọtụtụ mgbe, ndị uwe ojii na-egosipụta omume ọjọọ mgbe ụfọdụ n'ebe ụmụ amaala nọ. Agaghị akwụsị akwụsị ihe a ma emesia igwefoto a na-ahụ maka arụrụala, ha na-egosi ezi agwa ụmụ amaala a. Ewezuga isi ihe ọma ndị a, ka anyị bịa isi ihe anyị. Ọ bụrụ na anyị hụrụ igwefoto ndị a nwere ọtụtụ uru, yabụ kedu etu ese foto ndị a si eweta nsogbu.
Oge ụfọdụ, ndị mmadụ na-aga n'akụkụ igwefoto chọrọ ka onwe ha zere. N'ihe banyere igwefoto CCTV, akụkụ na mpaghara mkpuchi dị mgbe niile ka onye ahụ nwee ike idowe ya ngwa ngwa na mpụga mpaghara ndekọ. Mana ọ dị iche n’ihe igwefoto ahụ na-eyi. A na-etinye kamera ahụ na-eyi n'ahụ onye uwe ojii. Igwefoto ahụ na-esonyere onye uwe ojii ahụ ma nwee mpaghara mkpuchi ọ bụla. Nke a anaghị eme ka onye ahụ na-abịa n'ihu igwefoto zere ya. Yabụ, na agbanyeghị, onye ahụ abịa na ndekọ. Nke a na-akpaghasị nzuzo nzuzo ya bụ ihe ọjọọ.
Igwefoto uwe ndị uwe ojii na-eyi egosiwo uru dị ukwuu. Ichebe ndu na nnwere onwe nke ụmụ amaala na ndị isi bụ ihe dị mkpa na nke obodo, mana ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-enwe ahụ iru ala karị na ha na ndị uwe ojii yi kamera ahụ, enwere nsogbu zoro ezo na iji teknụzụ ọhụrụ a nwere ike itinye ọtụtụ ụmụ amaala n'ihe ize ndụ. Ọ bụ nke a mere na ọtụtụ mmadụ nwere ọtụtụ nchekwa nchekwa maka igwefoto uwe ndị uwe na-eyi.
Ajuju n’abia n’uche anyi mgbe anyi na eche maka igwefoto ndia yiri igwe, “gini ka a ga-eji reepu ndia nile mee?” Achọrọ ngalaba ndị uwe ojii ka ha jigide vidiyo site na dashboard na kamera ahụ maka afọ 5, mgbe nke a gasịrị, iwu kwadoro ha ịchụpụ ya na-emechi ikpe ahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na atụfu ya na enweghị nchekwa, ndekọ a nwere ike ịdị oke egwu na aka adịghị mma. Cheedị uru ozi a dị n'aka onye hacker ma ọ bụ ihe ndị ọzọ rụrụ arụ nwere ike iji data ndekọ na ụzọ ọjọọ iji merụọ ndị mmadụ ma ọ bụ ọbụna ndị mmadụ n'otu eserese. N'aka aka na-ezighi ezi, ozi a nwere ike ịba uru karịa data ego dị mkpa, mkpuchi, yana data nlekọta ahụike ma nwee ike ibute nnukwu nsogbu maka ha. Ihe a gosiri anyị na kamera ndị mmadụ yikwasịrị nwere ike imebi ọtụtụ mmadụ.
Dị ka anyị hụrụ na mbụ, ọtụtụ ndị achọghị ka ha nọrọ n'ihu igwefoto na enweghị iwu na-egbochi ha ime ya. Anyị ga-atụle mmetụta nke iwu na ụkpụrụ na nke a n'isiokwu na-abịanụ. Nke mbu, ka anyi nye nkọwa zuru ezu banyere nsogbu nzuzo nke igwefoto meghariri. Ọ dị mma, na-ebubata onwe gị na ndekọ na-enweghị ihe ọ bụla dị mkpa mana ọtụtụ ndị achọghị ka ihe nzuzo ha ghagbuo. Yabụ, ọ dị njọ. Ọzọkwa, ndị uwe ojii enweghị ike ịgwa onye ọ bụla na-agafe agafe izere igwefoto n'ihi na ọ bụ nsogbu maka ndị uwe ojii. Ọzọkwa, ha nwere ike ịgbanyụ igwefoto ma ọ bụrụ na ha na-agwa onye ọ bụla okwu n'ihu ha, mana nke a ga - ewepụ ebumnuche igwefoto. Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ uwe ojii ahụ na-agba ajụjụ ọnụ na ajụjụ site n'aka ndị a na-enyo enyo na ọnọdụ. N’oge ahụ, ekwesịrị ịgbanye igwefoto ma mee ihe ndekọ, ihe ọzọ ebumnuche igwefoto agaghị emezu.
Na mgbakwunye na nke a, a na-ejikwa kamera ahụ mmadụ yi mgbe a na-enyocha ya n'ime ụlọ mmadụ ma ọ bụ ihe onwe ya. Nke a bụ nnukwu iwu na-akwadoghị ịbanye n'ime nzuzo mmadụ na idekọ ya. N'oge nyocha ahụ, a pụkwara idekọ ozi gbasara ego dị mkpa nke nwere ike ibilite nchegbu kachasị. Enwere ike ịme ihe ndị a dịka ndị ọrụ uwe ojii nwere ike iji usoro ndị a na-achụ onye ebubo. Na mmechi, iwu na omebe iwu nwere ọrụ dị oke mkpa na nke a. Ugbu a, anyị ga-atụle ọrụ iwu na usoro iwu n'akụkụ ndị a.
Kedu ihe kpatara ọtụtụ nchekwa na nzuzo?
Igwefoto ndị yi n’ahụ na-eme ọtụtụ nchebe na nzuzo. Isi ihe kpatara nsogbu ndị a na - ewere ọnọdụ na enweghị iwu na ndị omebe iwu kwesịrị ekwesị. Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a mana ha nwere ike ịdị obere. Isi ihe kpatara nchedo na nzuzo bụ enweghị iwu na ndị omebe iwu. Nke a butere nsogbu gbasara igwefoto. Enwere ụfọdụ iwu na-enye ụmụ amaala, nzuzo ha zuru oke. Iwu ndị a kwesiri imelite ha. Ka anyị lee ọrụ nke iwu na omebe iwu na akụkụ ndị a.
Ọrụ Iwu na Iwu:
Anyị ahụla ka igwe onyonyo eyi na-emetụta ndụ nke ọtụtụ ndị mmadụ ma na-eweli nchegbu nzuzo na nchedo. Dịka anyị sirila hụ n’elu, iwu dịịrị maka ebumnuche ndị a niile.
Iwu na usoro iwu anyị ji nwayọ nwayọ na mmepe ma e jiri ya tụnyere nka na ụzụ ụwa.
N'ikwu okwu n'ozuzu, nsogbu ahụ esighi na ndị mmadụ, mana ọ bụ n'iwu iwu ndị mmadụ na-agbaso. Ọ dị mfe. Ọ bụrụ na enweghị iwu a kapịrị ọnụ maka iji ihe eji eme onyogbo nke arụ na-eme n'ahụ mmadụ, olee otu ọ ga - esi kwekọọ na ndị mmadụ. Ka-eji kamera ndị ahụ mebere ha nke ọma ma belata nsonaazụ na nsonaazụ na nzuzo, iwu kwesịrị ekwesị edepụtara nke ga-eleba anya na ojiji ngwaọrụ ndị a.
Iwu ahụ kwesịrị ịnwe nguzo kwesịrị ekwesị n'etiti nchegbu nzuzo yana ndekọ ndekọ mmekọrịta nke ụmụ amaala maka ebumnuche mmanye. Enwere ọtụtụ ihe ọma eji eserese ahụ na-ahụ maka uru na-aba uru maka ma ndị uwe ojii ma ndị mmadụ. Ọ chọrọ naanị iwu ụfọdụ iji nwee nguzozi. Enweghị iwu dị otú ahụ, igwefoto ndị uwe ojii na-eyi uwe nwere ihe egwu nke ịbụ ebe ọzọ na-emerụ ahụ maka ndị uwe ojii. Teknụzụ ihu dị na kamera ahụ na-eyi otu ihe egwu na-emetụta ihe nzuzo nke ụmụ amaala. Naanị ihe dị ya mkpa bụ iwepụta iwu ụfọdụ na-echekwa mmezi. N'ụzọ dị otu a, ma ụmụ amaala yana ngalaba ndị uwe ojii nwere ike imebi ma n'otu oge ahụ mezuo ihe ha chọrọ. Enwere ike ime nke a site na ịme iwu kwesịrị ekwesị nke a ga-agbaso.
Na mgbakwunye na mkpa maka iwu kwesịrị ekwesị nke na-elebara nchegbu nzuzo nke ọha na eze anya, ọ dị mkpa iji mmebe iwu iji hụ na ndekọ igwefoto anaghị eche nche na enweghị nchedo uwe ojii na-ezughị ezu. Ekwesịrị ilekọta ihe akaebe ahụ n'ụzọ ziri ezi ma a ga-enyerịrị ndị isi ọrụ aka ọrụ ha. Ọzọkwa, a ga-enwerịrị oge doro anya iji tinye ihe akaebe ahụ yana itinye ya n'ọdụ ndị uwe ojii. Mgbe emechisịrị ikpe ahụ, a ga-ehichapụ data ahụ e dere ede n'ihu ndị uwe ojii pụrụ iche, onye ahụ ga-agwarịrị onye ahụ site n'enyemaka nke akwụkwọ ozi.
A ga-enwerịrị iwu zuru oke na nrube isi n'iwu ndị a, a ga-enyekwa ndị na-emebi iwu ntaramahụhụ.
Akụkụ a dị elu eduga anyị na nsonaazụ na enwere naanị mkpa maka iwu ziri ezi na nke kwesịrị ekwesị nke na-ejigide nguzozi n'etiti ikike ụmụ amaala na ndị ọrụ igwefoto eyi. Ọzọkwa, ekwesịrị irubere iwu ahụ isi maka ịdị mma.
Nzuzo 5233 2 Echiche Taa